Condo Rent (ID-661) အား အင်းစိန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
Condo Rent (ID-661)
Condo rent in Insein Township, near Parami Road. Hall in 1800 sqft living area. Can use as office. Monthly rent price of condo is - 13 Lakhs (Nego).
အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ပါရမီလမ်းအနီးရှိ ငှားရန်ရှိသောကွန်ဒိုအိမ်ခန်းဖြစ်ပါသည်။ ၁၈၀၀ စတုရန်းပေအကျယ်ရှိပြီး အိပ်ခန်းများဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိပါ။ ရုံးခန်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကွန်ဒိုအိမ်ခန်း၏ လစဉ်ငှားရမ်းခမှာ - ၁၃သိန်း (ညှိနှိုင်း) ဖြစ်ပါသည်။
အမည်: Condo Rent (ID-661)